Sinnaanta Warbaahinta Bulshada iyo Soo Laabashada Maalgashiga | Martech Zone
Khamiis, Juun 2, 2011 Khamiista, Oktoobar 27, 2011 Douglas Karr
Gary Vaynerchuck ayaa si dhakhso leh u noqonaysa mid ka mid ah wargeysyada warbaahinta bulshada oo aan had iyo jeer u joojiyo inaan dhageysto, raaco, oo aan ku raaco. Bryan Elliott Waxaan dhowaan wareysi la yeeshay Gary qayb ka mid ah taxanaha taxanaha ah ee aan ku dhiirrigalin lahaa milkiile kasta oo ganacsi leh… yar yar ilaa agaasime… inuu dhagaysto.
Hal qodob oo ka mid ah wareysiga ayaa i taabtay - mana hubo in ay jirto xooga ku filan oo ku saabsan wareysiga. Gary wuxuu ka hadlay shirkadaha saaraya sinnaanta warbaahinta bulshada. Suuqleyda iyo shirkaduhu intabadan waxay raadinayaan dhaqsaha dhaqsiyaha badan, ololaha oo dib ugu soo laabtay maalgashiga suuq geynta. Waxaan aaminsanahay in ganacsiyada runtii u baahan yihiin inay ka fekeraan warbaahinta bulshada si ka duwan.
Marwalba waxaan dhihi jiray in baloog garaynta ay tahay maratoon, ee uusan aheyn orod. Waxaan hayaa macaamiil hadda jahwareersan maxaa yeelay, dhowr bilood ka dib, ma arkaan soo laabashada weyn ee qaar ka mid ah warshadaha ay sheegayaan. Waxay arkayaan koboc iyo dardar, in kastoo ... oo taasi waa waxa aan diiradooda ku saarayno.
Waa wax badan sida inaad lacag ku shubato koontadaada hawlgabnimada oo aad filayso inaad ka fariisato dhowr sano gudahood. Ma dhici kartaa? Waxaan u maleynayaa inaad ku dhici karto shey qarxa .. laakiin waa maxay fursadaha ?! Xaqiiqdu waxay tahay Tweet kasta, qoraal kasta oo blog ah, jawaab kasta oo Facebook ah iyo tan xigta ee aad hesho… waa maalgashi yar oo mustaqbalka ganacsigaaga ah. Jooji raadinta hagaajin degdeg ah.
Sida koontadaada hawlgabnimada, u fiirso isbeddellada oo kaliya hubi inay u socoto jihada saxda ah. Miyaad koraysaa dad soo socda? Miyaad la gaareysaa dad badan? Miyaad heleysaa tixraacyo badan, waxyaalo jecel iyo retweets? Kuwani dhammaantood waa naanaysyo, dinaarro iyo dimes lagu shubo xisaabtaada warbaahinta bulshada.
Anigu shaqsiyan waxaan ku bilaabay baraha bulshada qiyaastii toban sano ka hor waxaanan maal-gashaday toddobaadle, haddii aan maalinba ahayn. Dadka qaar ayaa la yaaban sida ugu dhakhsaha badan ganacsigeyga, DK New Media, ayaa koray. Waxaan xafiiskeena furanay in kabadan sanad waxaana si buuxda ujoognay ~ 18 bilood. Waxaan haynaa 3 shaqaale waqti-buuxa ah iyo in kabadan dersin shirkado shuraako waqti-buuxa ah oo aan maalin walba lashaqeyno. Waxaan leenahay macaamiil ka socda New Zealand, Yurub oo dhan iyo Waqooyiga Ameerika oo dhan.
Anigu ma dhisin shirkaddan sanad ama laba sano. Waxaan dhisay shirkadda tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaanan ku dhisay khibrad toban sano kale oo taas ka horreysay. Labaatan sano oo aan maalgelin ku samaynayay naftayda iyo bulshadayda internetka ka hor Weligay waan furay albaabada meheraddayda! Waxay u baahan tahay dardar, dulqaad, is-hoosaysiin… iyo cadaadis aan joogsi lahayn si loo guuleysto.
Haddii shirkaddaadu bilawdo maalgelin si dhakhso leh, halkii ka dambayn lahayd, fursadaha shirkaddaadu inay noqdaan kuwo adag oo yeelanaya bulsho aamin ah macaamiisha iyo taageerayaasha ayaa aad u weyn. Ku billow inaad sinnaanta ku geliso warbaahinta bulshada maanta oo ma seegi doontid. Maaddaama Gary sheegayo, isbeddel kasta oo warbaahinta casriga ah - laga bilaabo wargeysyada, joornaalada, raadiyaha iyo telefishanka, waxaa ku duugan shirkado aan la qabsan karin. Haddii shirkaddaadu go'aansato inayan maal gashan, taasi waa hagaag. Tartamayaashaada ayaa sameyn doona.
Khatartu waa goor dambe. Iskuday inaad hawlgab ka dhigto markay tahay 65 markaad bilowdo inaad keydiso 60 ma shaqeyneyso. Midkoodna ma maalgashan doono warbaahinta bulshada. Shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay aasaas ahaan wax ka beddelaan sida ay u eegaan warbaahinta bulshada, raadinta (saamaynta ay ku yeelatay bulshada) iyo suuqgeynta qadka tooska ah haddii ay guryahooda ku noolaadaan berri. Tani maahan wax iska caadi ah.
Jun 8, 2011 saacadu markay ahayd 11:22 AM
Tani waa habka aan dareemay toddobaadyadii ugu dambeeyay. Waa wax lagu farxo in la arko aragtidaada arintan isla markaana la aqoonsado in dadaallada warbaahinta bulshada ay waqti qaadato xitaa haddii jawiga nooca uu yahay 'jawaab NOW'!
Xaqiiqdii waxaan blogged ku saabsan walaacyadeyda kahor aqrinta tan! Dib ayaan u aqriyay kadib markaan aqriyay qoraalkaaga waxaanan arkay inaan qoray - "Waxaan u maleynayaa in qeybta HARDEST ee hagida dadaalada baraha bulshada ay dooneyso natiijooyin deg deg ah in laga helo aduunka jawaab deg deg ah!" (http://bit.ly/l5Enda).
Waad ku mahadsantahay boostada Douglas! Aad baa loo mahadiyey!
Agoosto 1, 2012 saacaddu markay ahayd 7:58 PM
Waad saxantahay! Ganacsiyada qaarkood waxay u arkeen warbaahinta bulshada si ka duwan. Haa, waxay qaadataa dadaal badan iyo waqti si loo gurto wixii aad beeratay.